Winetime Seafood Kurongedza - Dhizaini magazini
Kurongedza Iko kurongedza kwekugadzira kweWinetime Seafood Series kunofanirwa kuratidza hutsva uye kuvimbika kwechakagadzirwa, chinofanira kuchisiyanisa zvakanaka kubva nevanokwikwidza, kuwirirana uye kunonzwisisika. Iyo mavara anoshandiswa (yebhuruu, chena uye eorenji) anogadzira musiyano, simbisa zvakakosha zvinhu uye anoratidza chimiro chinomira. Imwechete yakasarudzika pfungwa yakagadziriswa inosiyanisa iyo nhete kubva kune vamwe vanogadzira. Ruzivo rweruzivo rwekuona rwakaita kuti rive nyore kuona zvigadzirwa zvemhando, uye kushandiswa kwemifananidzo panzvimbo yemifananidzo kwakaita kuti kurongedza kwacho kunakidze.
Zita rechirongwa : Winetime Seafood, Vagadziri zita : Olga Takhtarova, Izita remutengi : SOT B&D.
Kurongedza Olga Takhtarova Winetime Seafood